Maydad Tobon kor u dhaafaya oo lagu arkay xadka u dhexeeya Guatemala & Mexico. – SBC
Maydad Tobon kor u dhaafaya oo lagu arkay xadka u dhexeeya Guatemala & Mexico.
Dowlada Guatemala ayaa baaraysa Madaxyada maydad 25 kor u dhaafaya,kuwaasi oo lasoo dhigay deegaan ku yaala xadka wadamada Guatemala iyo Mexico.
Maydadka oo isugu jira Rag iyo Haween ayaa la aamin sanyahay in ay dileen Kooxaha Gangs-ka ee ku xoogan deegaanada kuyaala xadka kala qaybiya Mexico iyo Guatemala.
Taliyaha Ciidamada booliska Guetamala ayaa sheegay in ay maydadka ka heleen deegaan kuyaal gobolka Peten oo 500km u jira caasimada dalkaasi.
Waqooyiga Guetemala ayaa ah goob ay ku xoogan yihiin kooxaha Gangs-ka,waxaana asbuucyadii aynu soo dhaafnay jiray dagaalo u dhexeeya kooxdaasi oo ka socday deegaanka maydadka aan madaxa lahayn laga helay.
Afhayeen u hadlay Ciidamada Milatariga dalkaasi oo lagu magacaabo Col Ron Urizar ayaa sheegay in ay u direen deegaanka Maydka laga helay Ciidamo badan,iyadoona ay weerari doonaan cid kasta oo lagu tuhmo in ay qalalaaso samaynayso.
Inta badan wadamada qaarada Laatiin Ameerika ayaa ah goob ay ku xoogan yihiin kooxaha Gangs-ka,waxaana ay mararka qaarkood isu gaystaan iyaga dhexdooda dilal Arxan dara ah oo lamid ah kuwo haatan lagu arkay xadka dalkaasi uu Mexico la wadaago.